Data Sayenzi nekushandisa Kwayo - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
mbishi dhata haina zvainobatsira kudzamara yakakamurwa kuita seti yedhata kuti vataure zvabuda. Dhata inobatsira mukuona chinokonzera dambudziko uye inobvumira masangano kuti afungidzire hukama pakati pezviitiko munzvimbo dzakasiyana, madhipatimendi, uye masisitimu. Pano, isu titarise Data Science, its analysis, and some of its applications in various industries.
Chii chinonzi data sainzi?
Data sainzi inosanganisira kugadzira nzira dzekunyora, kuchengeta, uye kuongorora ruzivo. Iyo inoshandiswa kutora ruzivo uye zvinonzwisisika zvinonzwisisika kubva kune yakarongedzwa / isina kurongeka data. Icho chinangwa ndechekunzwisisa kuyerera kweruzivo uye kuona vangangove mikana yebhizinesi.
Chidzidzo ichi chikamu chepakati pezvematongerwo enyika uye chinosanganisira manhamba, sainzi yemakomputa, ongororo, uye machine learning. Computer sainzi inosanganisira kugadzira zvirongwa uye algorithms anorekodha uye kugadzirisa data, nepo manhamba ari iko kuunganidzwa, kuongorora, kududzira, kuratidzira, uye kuronga kwedata.
Kunyorera kweData Sayenzi
Data sainzi yave peturu iri kubatsira maindasitiri nemabhizinesi kukurumidza kukosha kwayo kumusika pachikero.
1. Nezveutano: Data sainzi mu nezveutano imaging yezvokurapa. Ino gonesa makomputa kududzira MRIs, X-rays, mammography, uye yakafanana mifananidzo. Izvo zvinobatsirawo kuziva mapatani mune data kuti aone mamota, artery stenosis, nhengo anomalies, nezvimwewo Uyezve, inogona zvakare kufanotaura nezvezvirwere, kubatsira varapi vezvokurapa kupa zvakasarudzika kurudziro yehutano.
2. E-commerce uye chitoro indasitiri: Iyo munda inobatsira kune vekutengesa uye e-commerce indasitiri sezvo ichibatsira kufungidzira kutenga, purofiti, kurasikirwa, uye inogona kukurudzira vatengi mukutenga kuburikidza nemazano akasarudzika. Zvitengesi zvezvitoro zvinoongorora data kugadzira profiles dzevatengi uye kushambadzira zvine hungwaru uye zvirongwa zvekunangisa.
3. Kutakura: Vaongorori ve data hombe vanotarisa pakuderedza mutengo wekutakura kuburikidza neyakajeka nzira uye nekupa inowirirana mutengo unowirirana wekugovera kudiwa.
4. Zvemari: Makambani anoshandisa business intelligence maturusi ekuongorora maitiro e data. Iko kushandiswa kwesainzi yedata kwakavandudza kuona kusanzwisisika uye kubiridzira. Mune zvemari, inoongorora uye inoderedza njodzi iripowo pakutengeserana.
5. Manufacturing: Data sainzi ine akawanda anoshanda mafomu mukugadzira. Izvi zvinosanganisira kushandiswa kwemafuta, kugadzirisa uye mashandiro engarava. Izvo zvinobatsirawo makambani kuongorora chaizvo zvinhu zvese zvine chekuita nekukura kwebhizinesi.
6. Kubhengi: Data sainzi yakatungamira mabhangi kuti agadzirise ruzivo kubva kune akawanda magero mune chaiyo-nguva. Mabhangi anoshandisa izvi munzvimbo dzevashandi, kuona kubiridzira, kufungidzira, kunzwisisa manzwiro evatengi, kudhinda vatengi, uye kushambadzira.
Data sainzi zvakare inosanganisira muchina kudzidza - munda wehunyanzvi uko masayendisiti anoshandisa iyo ruzivo kudzidzisa makomputa. Kambani inogona kushandisa nzira yesainzi kumhanyisa bvunzo uye kubvisa mhedzisiro inogona kupa ruzivo rwakakosha nezvevashandisi vayo.
Hunyanzvi uye hunyanzvi hunyanzvi hunodiwa kushandisa data sainzi mubhizinesi. Inoita seamburera inosanganisira zvese zvishandiso uye matekinoroji anoshandiswa panguva yehupenyu kutenderera matanho e data. Iyo munda wauya kure nzira kubva kukwenya manhamba kuita papyrus, kusvika kune yanhasi-zuva kubaya manhamba mukhibhodi.